Mareykanka oo sheegay in ay qaadeen duqeyn is-difaacid ah intii lagu jiray weerar ay ciidamo huwan ah ku qaadeen tuulada Buulo-guduud - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMareykanka oo sheegay in ay qaadeen duqeyn is-difaacid ah intii lagu jiray weerar ay ciidamo huwan ah ku qaadeen tuulada Buulo-guduud
Mareykanka oo sheegay in ay qaadeen duqeyn is-difaacid ah intii lagu jiray weerar ay ciidamo huwan ah ku qaadeen tuulada Buulo-guduud. [Sawirka: Archive]
Garoowe-(Puntland Mirror) Howlgalka ciidamada Mareykanka ee qaarada Afrika (AFRICOM) ayaa sheegay in ay qaadeen duqayn ka dhan ah maleeshiyada Al-Shabaab ee gudaha Soomaaliya, kolkii la taliyeyaal Mareykan ah ay ku weheliyeen ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Midowga Afrika tababar la dagaalanka argagixisada ah oo qabsoomay 7-dii bishaan Janaayo.
AFRICOM ayaa ku qeexay weerarkaas duqaynta ah “Is-difaacid”, iyaga oo todobo weerar oo kaas lamid ah ka sameeyay gudaha Soomaaliya sanadkii lasoo dhaafay ee 2016-ka, sida ay xaqiijiyeen.
Sida ay sheegeen AFRICOM, la taliyeyaasha ayaa kala qeybgalay ciidamo huwan ah oo Soomaali iyo AMISOM isugu jira oo weerar ku qaaday tuulada Buulo-guduud, oo u dhow magaalada Kismaayo.
AFRICOM ayaa sheegay in ciidamada huwanta ah ay qaadayeen howlgalo ka dhan ah saldhigyada ururka Al-Shabaab uu ku leeyahay deegaanada koonfurta Soomaaliya.
“Intii lagu guda jiray howlgalka la dagaalanka argagixisada ah ee ka dhan ahaa Al-Shabaab, ciidamada huwanta ah waxay kormeereen khatarta dagaalyahanada Al-Shabaab ay ku yihiin xasiloonidooda iyo ammaankooda,” ayay dhaheen AFRICOM.
“Mareykanku wuxuu qaaday duqayn dhanka cirka ah oo is-difaacid ah si loo yareeyo khatarta Al-Shabaab, ma jiraan cid dagaalyahanada cadowga ah oo la dilay.” Ayay ku dareen.
AFRICOM ayaa weeraro badan oo dhanka hawada ah ku qaadayay maleeshiyada Al-Shabaab tan iyo sanadkii 2006-dii.
Duqayntii ugu khasaaraha badnayd oo Mareykanku la beegsadaan Al-Shabaab ayaa dhacday 7-dii bishii Maarso ee sanadkii 2016-ka, waxaana ay ka dhacday saldhig milatari oo la dhaho “Raaso” oo ay Al-Shabaab ku lahaayeen duleedka Muqdisho, ku dhawaad 150 dagaalyahan ayaa weerarkaas lagu dilay.